privacy မူဝါဒ allout.cheap - ၅၀% သို့မဟုတ် ၁ + ၁ စားသည် သောက်ပါ | နေ
သင့်အကောင့်နှင့်ပတ်သက်သောယေဘူယျမေးခွန်းများသို့မဟုတ်အကူအညီအတွက် Customer Service ကိုမည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်ဆိုလျှင် www ၏အောက်ခြေရှိ contact link ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ online help center သို့သွားပါ။allout.cheap ။ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဖော်ပြချက်သို့မဟုတ်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ cookies များနှင့်အလားတူနည်းပညာများကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်သီးသန့်မေးခွန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Data Protection Officer သို့မဟုတ် Privacy Office သို့အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ [အီးမေးလျ protected] .
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ရန်တာဝန်ရှိသည်မှာ ALLAUT TSIP IKE ။ ကျေးဇူးပြု၍ အကူအညီတောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးသည်သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုမဖြည့်ဆည်းမီသင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်နိုင်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။
•သင်ပေးသောသတင်းအချက်အလက်များ - ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ပေးသောသတင်းအချက်အလက်များကို -
◦သင်၏အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ စာတိုက်လိပ်စာသို့မဟုတ်စာတိုက်သင်္ကေတ၊ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း (များ) နှင့်ဖုန်းနံပါတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုသင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောအခါသင်စုဆောင်းသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်သုတေသနသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအပါအဝင်၎င်းအချက်အလက်များကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်စုဆောင်းသည်။
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြိုက်များ၊ သင်၏အကောင့်ဆက်တင်များ (ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက်၏ "အကောင့်" ကဏ္ pre ရှိ ဦး စားပေးမှုများအပါအဝင်) ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်သင်ပေးသောအခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုληροφοςες လမ်း။
•ကျွန်ုပ်တို့အလိုအလျောက်ကောက်ယူသည့်သတင်းအချက်အလက်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှု၊ ကုမ္ပဏီနှင့်သင်၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာများကိုစုဆောင်းသည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူရန်သင်အသုံးပြုသောသင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အခြားစက်ပစ္စည်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းသည်။ (သင်၏ကွန်ပျူတာ၊ စမတ်ဖုန်း၊ တမ်ပလို) ။ ဤအချက်အလက်တွင်ပါဝင်သည်
သင်၏လုပ်ငန်းကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ allout.cheap စတိုးဆိုင်အမြတ်ပြီးဆုံးသည်အထိရှာဖွေရေးမေးမြန်းချက်များနှင့်လုပ်ရပ်များကဲ့သို့။
◦ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရမည့်နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့်အကြောင်းပြချက်၊ စကားဝိုင်းမိတ္တူများ၊ ဖုန်းခေါ်လျှင်သင်၏ဖုန်းနံပါတ်နှင့်ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းစသည့်သင်၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊
mobile ထိုကဲ့သို့သော ID များပါ ၀ င်သောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၊ တက်ဘလက်များနှင့်မာလ်တီမီဒီယာထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ကြော်ငြာ ID များ (ပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါ "Cookies and Internet Ads" အပိုင်းကိုကြည့်ပါ),
υευစက်ပစ္စည်းနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များ (ဥပမာ၊ ပုံစံနှင့်ဖွဲ့စည်းမှု)၊ login information, pageview statistics, referral source (ဥပမာ referral URL), IP address (ထို မှနေ၍ ယေဘူယျတည်နေရာကိုကြည့်နိုင်သည်) ), ဘရောက်ဇာနှင့်ဝဗ်ဆာဗာမှတ်တမ်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်,
cookies ကြော်ငြာဒေတာများ (ကြော်ငြာများ၏ရရှိနိုင်မှုနှင့်ဖော်ပြမှုသတင်းအချက်အလက်များ၊ ဆိုက်၏ URL နှင့်နေ့စွဲနှင့်အချိန်တို့ကဲ့သို့) ကွတ်ကီးများ၊ ဝက်ဘ်ချိတ်ဆက်မှုများနှင့်အခြားနည်းပညာများအသုံးပြုခြင်းမှစုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်။ (အသေးစိတ်အတွက် "ကွတ်ကီးများနှင့်အင်တာနက်ကြော်ငြာများ" အပိုင်းကိုကြည့်ပါ)
•အခြားအရင်းအမြစ်များမှသတင်းအချက်အလက်များ - ငါတို့သည်လည်းအခြားရင်းမြစ်များမှသတင်းအချက်အလက်များကိုလက်ခံရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်အလက်ကိုဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဖော်ပြချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အလေ့အကျင့်များနှင့်အချက်အလက်အရင်းအမြစ်မှချမှတ်ထားသောအခြားအကန့်အသတ်များနှင့်အညီကာကွယ်သည်။ ဤအရင်းအမြစ်များသည်အချိန်နှင့်အမျှကွဲပြားသော်လည်း၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်သင်၏အိုင်ပီလိပ်စာကို အခြေခံ၍ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုဖေါ်ထုတ်ရန်ကူညီပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသာမကဤသီးသန့်တည်ရှိမှုဖော်ပြချက်နှင့်ကိုက်ညီသောအခြားအသုံးပြုမှုများအတွက်လည်း၊
our ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကို၎င်းတို့၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ထပ်အမှတ်တံဆိပ် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသောသို့မဟုတ်ပူးတွဲစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုစီစဉ်သောမိတ်ဖက်များနှင့်ရွေးချယ်ထားသောတွဲဖက်ထားသောကုမ္ပဏီများ၊
payληρωμήςငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကကျွန်ုပ်တို့အားမည်သို့ငွေပေးရမည့်အကြောင်းနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသော,
◦အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းဒေတာပံ့ပိုးပေးသူများမှကျွန်ုပ်တို့သည်လူ ဦး ရေ၊ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အွန်လိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုရရှိသည်။
ငါတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများအားထောက်ပံ့ခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စီမံခြင်း၊ တိုးတက်စေရန်နှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်၊ သင်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။
•သင်၏ပထဝီဝင်အနေအထားကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်ခြင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသောအကြောင်းအရာများကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကဖေးဆိုင်များ၊ သင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရသောနေရာထိုင်ခင်းအကြံပြုချက်များ၊ သင်၏အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်ခြင်း နှင့်မေးခွန်းများနှင့်တောင်းဆိုမှုများအတွက်ထိရောက်သော,
•လိမ်လည်ခြင်းအပါအ ၀ င်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောတားမြစ်ထားသောသို့မဟုတ်တရားမ ၀ င်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုတားဆီးရန်၊ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များကိုပြenfor္ဌာန်းရန် (ဥပမာ 1 ယူရိုနှင့်အတူရုံးတင်စစ်ဆေးကာလအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီမှုကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း)၊
•ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခြင်းနှင့်နားလည်ခြင်း၊ (၀ န်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံအပါအ ၀ င်) ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အကြောင်းအရာရွေးချယ်ခြင်း၊
•ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအကြောင်း (ဥပမာ၊ အီးမေးလ်၊ push အသိပေးချက်များ၊ စာသားစာပို့ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းစာတိုပို့ခြင်းလိုင်းများမှတဆင့်) သင်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ allout.cheap, မှာရရှိနိုင် features အသစ်များနှင့်အကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကို allout.cheapအထူးကမ်းလှမ်းချက်များ၊ အရောင်းမြှင့်တင်မှုများနှင့်စားသုံးသူစစ်တမ်းများအပြင်စကားဝှက်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းတောင်းဆိုခြင်းကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတောင်းဆိုမှုများအတွက်ပံ့ပိုးမှု။ သင်၏ဆက်သွယ်ရေး ဦး စားပေးများကိုမည်သို့ပြောင်းလဲမည်နှင့်မည်သို့ပိုမိုလေ့လာရန်ဤ Privacy ဖော်ပြချက်၏ "သင်၏ရွေးချယ်မှုများ" အပိုင်းကိုကြည့်ပါ။
ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုဖော်ပြချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအတွက်တရား ၀ င်သည့်အခြေခံသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်၎င်းတို့အသုံးပြုခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်း၏တိကျသောအခြေအနေပေါ်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီအကြားရှိစာချုပ်များကိုပြserves္ဌာန်းရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအခါ (ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်) သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံမှများသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မှစုဆောင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏တရား ၀ င်အကျိုးစီးပွားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားကိုမထိခိုက်ပါက သင်၏အချက်အလက်သို့မဟုတ်သင်၏အခြေခံအခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များ (ဥပမာကုမ္ပဏီ၏တိုက်ရိုက်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းများကိုသင်၏ ဦး စားပေးချက်များနှင့်အညီ) သို့မဟုတ်ထိုရည်ရွယ်ချက်ကိုသဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ပါက (ဥပမာလှုပ်ရှားမှုအချို့တွင်ပါဝင်ရန်) ထိုကဲ့သို့သောတိကျတဲ့စစ်တမ်းများနှင့်အာရုံစိုက်အုပ်စုများအဖြစ်စားသုံးသူများ၏အမြင်များနှင့် ပတ်သက်. တုံ့ပြန်မှု) ။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်းသည်ဥပဒေအရလိုအပ်နိုင်သည် (သို့) သင်၏အရေးကြီးသောအကျိုးစီးပွားများသို့မဟုတ်တတိယပါတီများ၏အရေးကြီးသောအကျိုးစီးပွားများ (ဥပမာငွေပေးချေမှုလိမ်လည်မှုကိုတားဆီးရန်သို့မဟုတ်သင်၏အထောက်အထားကိုအတည်ပြုရန်) အတွက်လိုအပ်နိုင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို (ငါတို့မှီခိုအားထားသည့်တရားရေးအခြေခံများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယန္တရားများအပါအ ၀ င်)၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှကွတ်ကီးများသို့မဟုတ်အလားတူနည်းပညာများအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Data Protection Officer သို့မဟုတ် Privacy Office သို့အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ [အီးမေးလျ protected]
•သတင်းအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီ allut TSIP IKE ကုမ္ပဏီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သတင်းအချက်အလက်မျှဝေမည် - ဒေတာများပြုပြင်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူခြင်း၊ ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ နှင့်ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးထုတ်ပြန်ချက်၏ "သတင်းအချက်အလက်အသုံးပြုခြင်း" အပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောအခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်။
• ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ - ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးရန်သို့မဟုတ်သင့်အား ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီရန်အခြားကုမ္ပဏီများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များသို့မဟုတ်ကန်ထရိုက်တာများ (“ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ”) ကိုအသုံးပြုသည်။ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (အိုင်တီ) ၀ န်ဆောင်မှုများပေးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်အခြားငွေပေးချေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ကြွေးမြီစုဆောင်းခြင်း၊ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်တိုးတက်မှု (ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အတူအသုံးပြုသူနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များအပါအဝင်) နှင့်စားသုံးသူစစ်တမ်းများကိုစီမံခြင်းနှင့်စီမံခြင်း။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရာတွင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသို့မဟုတ်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိနိုင်သည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာထက် ကျော်လွန်၍ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်ရန်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ခွင့်မပြုပါ။
•အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကမ်းလှမ်းချက်များ - ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပါ ၀ င်မှုအတွက်ပူးတွဲအစီအစဉ်များကိုပူးတွဲမြှင့်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏မြှင့်တင်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောသင်၏အမည်နှင့်အခြားအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်လိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုရန်မှာဤတတိယပုဂ္ဂိုလ်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုအလေ့အထများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
•ကာကွယ်ပါ allout.cheap နှင့်အခြားသူများ: အိပ်ချ် allout.cheap ကျွန်ုပ်တို့သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကထိုကဲ့သို့ထုတ်ဖော်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာယုံကြည်ပါကသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းသို့မဟုတ်အခြားနည်းဖြင့်သုံးနိုင်သည်။
(က) ပြည်သူ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့မှသက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊
(ခ) မည်သည့်ချိုးဖောက်မှုကိုမဆိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအပါအ ၀ င်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ၊
(ဂ) တရားမ ၀ င်သို့မဟုတ်အလားအလာရှိသောတရားမဝင်လုပ်ငန်းများ (ငွေပေးချေမှုလိမ်လည်မှု) နှင့်လုံခြုံရေးသို့မဟုတ်နည်းပညာဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်၊
()) ၎င်း၏ရပိုင်ခွင့်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ရန် allout.cheapလိုအပ်ချက်များသို့မဟုတ်ဥပဒေအရထောက်ပံ့ပေးသည်နှင့်အညီ၎င်း၏အသုံးပြုသူများသို့မဟုတ်အများပြည်သူ။
•စီးပွားရေးလွှဲပြောင်းခြင်း - ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း၊ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလွှဲပြောင်းခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အပါအ ၀ င်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မှလွှဲပြောင်းပေးမည်။ အကယ်၍ လက်ခံသူကသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်အညီသင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်သဘောတူလျှင် ။
•ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ allout.cheapပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (သို့) အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်တင်ပို့နိုင်လိမ့်မည်။
•ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှု၏အချို့အစိတ်အပိုင်းများတွင်သင်၏စမတ်ကိရိယာဖောက်သည်များနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများကို သုံး၍ အီးမေးလ်၊ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျနှင့်လူမှုရေးသို့မဟုတ်အခြားမျှဝေသည့်အက်ပ်များမှတဆင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်သင့်အားပေးသောကိရိယာတစ်ခုရှိနိုင်သည်။
•သတင်းအချက်အလက်မျှဝေရန်သင့်ကိုခွင့်ပြုသည့်လူမှုမီဒီယာ add-ons များနှင့်အလားတူနည်းပညာများမှတဆင့်။
လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက် plug-in များနှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုလူမှုကွန်ယက်များကထိန်းချုပ်ထားပြီးသက်ဆိုင်ရာကွန်ယက်များ၏အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
သင်၏အကောင့်ကိုအလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်သင်သည်အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ပြီးနောက် "ဤကိရိယာကိုမှတ်ထားပါ" အင်္ဂါရပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်သည်သင့်အားသင်၏အကောင့်ကိုချက်ချင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကိုစီမံရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည့်နည်းပညာကိုအခြေခံသည် allout.cheap သင်၏အပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်ဘရောက်ဇာမှ ၀ န်ဆောင်မှုသို့ပြန်လာသောအခါသင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်သို့မဟုတ်အခြားအသုံးပြုသူ ID ကိုပြန်လည်ရိုက်စရာမလိုပါ။
အကောင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုဖယ်ရှားရန် allout.cheap သင့်စက်ပစ္စည်းမှ
အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီသည်လုံခြုံမှုရှိသည့်အကောင့်ငွေချေးခြင်းအတွက်လုံခြုံရေးကိစ္စများအတွက်တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ် (1) လက်လှမ်းမီစက်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အကယ်၍ သင်ဟာကွန်ပျူတာ (သို့) ပံ့ပိုးထားတဲ့စက်ကိုရောင်း၊ ပြန်ပို့မယ် allout.cheap, သင်ရောင်းချသို့မဟုတ်မပြန်မီ device ကို disconnect နှင့်ပိတ်ထားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်၏စကားဝှက် (သို့) စက်ပစ္စည်း၏လုံခြုံရေးကိုသင်ဂရုမစိုက်ပါကသို့မဟုတ်သင်၏ကိရိယာကိုပိတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းမပြုပါကအနာဂတ်သုံးစွဲသူများသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်အပါအဝင်သင်၏အကောင့်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်ကတတိယပါတီများကိုသင်၏အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်ဆိုပါက၎င်းတို့သည်သင်၏သမိုင်းကြောင်း၊ ကြည့်ရှုခြင်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့် (ဥပမာအချို့ကိစ္စများ၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအပါအဝင်) သင်၏သတင်းအချက်အလက်ကိုမြင်နိုင်လိမ့်မည်။ သင်၏အကောင့်သတင်းအချက်အလက် (အီးမေးလ်လိပ်စာသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ၏ "အကောင့်" areaရိယာ၌အခြားသတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင်) ။
အီးမေးလ်နှင့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ။ အီးမေးလ်သို့မဟုတ်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှတိကျသောဆက်သွယ်ရေးမက်ဆေ့ခ်ျများမရရှိတော့ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ "အကောင့်" အပိုင်းရှိ "ဆက်သွယ်မှုဆက်တင်များ" ရွေးစရာကို သွား၍ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုသတင်းလွှာများလက်ခံရရှိရန်ဤအချက်ကိုပယ်ဖျက်ပါ။ ။ သင်၏အကောင့်နှင့်သက်ဆိုင်သောအရောင်းအ ၀ ယ်မှုများကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဆိုင်သောစာပေးစာယူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှအသစ်ပြောင်းခြင်းမက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖယ်ရှားရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။
သတိပေးချက်များကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းမှ push သတိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည် allout.cheap။ အကယ်၍ သင်ကထိုကဲ့သို့သောအသိပေးချက်များကိုလက်ခံရန်မလိုတော့ဟုဆုံးဖြတ်ပြီးပါက၎င်းတို့ကိုသင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာဆက်တင်များမှပိတ်ထားနိုင်သည်။
ပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာများ ရည်မှန်းထားသောကြော်ငြာများသည်အင်တာနက်ပေါ်ရှိအပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအသုံးပြုခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏အလားအလာရှိသောအကျိုးစီးပွားနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောအွန်လိုင်းကြော်ငြာများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင် browser ကိုအသုံးပြုလျှင်သင်၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကျိုးစီးပွားကိုဆုံးဖြတ်ရန်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် cookies နှင့် web sites များကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်သည်ကြော်ငြာနံပါတ်ပါသည့်လက်ကိုင်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ သို့မဟုတ်မီဒီယာပစ္စည်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုနေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအိုင်ဒီကို သုံး၍ သင်၏အလားအလာရှိသောအကျိုးစီးပွားများကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ မှပစ်မှတ်ထားကြော်ငြာများပေါ်တွင်သင်ရွေးချယ်မှုအတွက် allout.cheap “ Cookies နှင့် Internet Ads” (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ကိုကြည့်ပါ။
၎င်းကိုသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ "အကောင့်" ကဏ္easilyမှအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုနေရာတွင်သင်သည်သင်၏အကောင့်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးကိုဆက်သွယ်နိုင်ပြီးသင်၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်၊ ငွေပေးချေမှုသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းမွမ်းမံနိုင်သည်။ allout.cheap နှင့်သင်၏အကောင့်နှင့်ပတ်သက်သောသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အချို့ (ဥပမာသင်ကြည့်ပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအကြောင်းအရာနှင့်သင်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကဲ့သို့) ။ "Account" အပိုင်းကိုဝင်ရောက်ရန်သင် logged in လုပ်ရမည်။ သင်၌ရှိသောသင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖျက်ပစ်ရန်သင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
မေးမြန်းလိုပါကသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားမေးခွန်းများရှိပါက ၀ ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာအားလုံးရှိ "ဆက်သွယ်ရန်" link မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ allout.cheap အောက်ခြေမှာ။ သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေများအရ၎င်းတို့၏ဒေတာကာကွယ်ရေးအခွင့်အရေးကိုကျင့်သုံးလိုသောအသုံးပြုသူများထံမှရရှိသောတောင်းဆိုမှုများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်ပါသည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်အတွက်ရွေးချယ်စရာများပိုမိုများပြားသောဤသီးသန့်လုံခြုံရေးထုတ်ပြန်ချက်၏ "သင်၏ရွေးချယ်မှုများ" အပိုင်းကိုလည်းကြည့်ပါ။
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ကန့်ကွက်နိုင်သည်၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးမှုကိုကန့်သတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏သယ်ဆောင်နိုင်မှုကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းပြီးဆောင်ရွက်ပါကသင်သည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ ခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းသည်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းမတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သောမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုမဆိုထိခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုခွင့်ပြုချက် မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်ဥပဒေရေးရာအခြေခံတွင်မဆိုသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှစုဆောင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးအာဏာပိုင်များထံအယူခံဝင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအဆောက်အအုံများမှာဂရိနိုင်ငံဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများဥပမာ၊ သင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုတွေ့ဆုံခြင်း၊ ငွေတောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့်၎င်းသီးသန့်လုံခြုံရေးထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမလိုအပ်တော့သည့်အခါလုံခြုံစွာဖျက်ဆီးရန်သို့မဟုတ်အမည်ဝှက်ရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်သည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆုံးရှုံးခြင်း၊ ခိုးခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းများမှကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု၊ သင်၏လုပ်ဆောင်မှုသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအားစီမံခန့်ခွဲခြင်း၏အန္တရာယ်နှင့်ကိုက်ညီသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်မှု allout.cheap တတိယပါတီပလက်ဖောင်းများမှတဆင့်ပေးအပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုပေါ်လစီများသည်ငါတို့နှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်ဟုသူကဆိုသောတတိယပါတီဆိုဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ဥပမာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည် allout.cheapစမတ်ဖုန်းမှသည် Affiliate စတိုးအထိ - မြေပုံများနှင့်တွဲဖက်ထားသောကုမ္ပဏီ၏လျှောက်လွှာဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးပါ။
ဤဆိုဒ်များနှင့်ပလက်ဖောင်းများသည်သီးခြားလွတ်လပ်သောသီးသန့်တည်ရှိမှုသို့မဟုတ်အချက်အလက်ပေါ်လစီများ၊ privacy ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ တံဆိပ်များနှင့်သင်ဂရုတစိုက်ဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုစာရင်းသွင်းရန် eatout.cheap, drinkout.cheap, stayout.cheap, allout.cheapသို့မဟုတ်မည်သည့်ပေါင်းစပ်မှုမျိုးမဆိုသင်သည် 18 နှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ကြီးရမည်။ အချို့သောတရားစီရင်မှုများတွင်တရားဝင်သက်တမ်းသည် 18 နှစ်ကျော်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်အသင်း ၀ င်ဖြစ်ရန်သက်ဆိုင်ရာအသက်အရွယ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုဖော်ပြချက်အားပြောင်းလဲနေသောဥပဒေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပဒေနှင့်အညီ (သူတို့၏ထိရောက်သောနေ့ရက်အပါအ ၀ င်) မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုမျိုးကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ထံအကြောင်းကြားပါမည်။ ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်း allout.cheap ထိုကဲ့သို့သောနောက်ဆုံးသတင်းများကိုအင်အားဖြည့်တင်းလိုက်ပြီးနောက်ထိုကဲ့သို့သောပြောင်းလဲမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် (သင့်လျော်စွာ) လက်ခံခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုဖော်ပြချက်အားနောက်ဆုံးသတင်းများကိုသင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်လက်ခံခြင်းမပြုပါကဤဝန်ဆောင်မှုကိုသင်၏အသုံးပြုမှုကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည် allout.cheap။ ဒီသီးသန့်တည်ရှိမှုဖော်ပြချက်နောက်ဆုံးရက်စွဲကိုကြည့်ရှုရန်၊ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ "နောက်ဆုံးပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း" အပိုင်းကိုကြည့်ပါ။